Sümela Teleferik စီမံကိန်းအတွက် Flash ရှင်းလင်းချက်။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ61 TrabzonSümela Teleferik စီမံကိန်းအတွက် Flash ရှင်းလင်းချက်။
13 / 02 / 2020 61 Trabzon, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TELPHER
Sumela ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းအတွက် Flash ရှင်းပြချက်
Trabzon မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Murat ZorluoğluကSümelaတွင်တည်ဆောက်မည့်ကေဘယ်ကြိုးနှင့်ပတ်သက်သည့်လျှပ်တစ်ပြက်ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကာတာနိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်းအရောင်း Manager ကဠာÖkmenတူရကီအတွက် Trabzon မြို့တော်ဝန် Murat Zorluoğlနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အာဏာပိုင်များကကျင်းပခဲ့သည်။ ခရီးစဉ်အတွင်းမေလ ၂၀ ရက်တွင်အပြန်အလှန်ပျံသန်းမည့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ Trabzon နှင့်ကာတာတို့အကြားအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
Zorluoğluသူတို့ကာတာနိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်းအရောင်း Manager ကိုတူရကီစကွဝဠာÖkmen "ကာတာနိုင်ငံမှ Trabzon ထံမှအလွန်အရေးကြီးသောဝယ်လိုအားစတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေအချိန် ပတ်သက်. နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုမှပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကာတာပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀၊ မေလ ၂၀ ရက်မှ စ၍ တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေယာဉ်များသည်စက်တင်ဘာလကုန်အထိဆက်လက်ပါလိမ့်မည်။ ဝယ်လိုအားဆက်ရှိနေပါက၎င်းသည်နှစ်ချုပ်စာအုပ်သို့လည်းပြန်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့ရာသီအလိုက်စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ သူတို့ကကာတာကနေကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးလေယာဉ်ဘယ်တော့စမလဲ။
မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Murat Zorluoğluကကာတာလေကြောင်းလိုင်းသည် Trabzon နှင့်ကာတာတို့အကြားလေယာဉ်ပျံသန်းမှုတစ်ခုစတင်မည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့က Metropolitan စည်ပင်သာယာအနေဖြင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး Trabzon ကိုပိုမိုရွေ့လျားစေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုZorluoğluကပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ Trabzon အတွက်လွန်ခဲ့သော ၁၀-၁၅ နှစ်အတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအပေါ်ဆက်လက်။ သင်ဤစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူအစကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ guest ည့်သည်တိုင်းအားကာတာ၊ ဒိုဟာ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အခြားဒေသများမှထရာဘဇွန်သို့ပျော်ရွှင်စွာပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒီအဘို့အအစီအမံယူပါ။ ငါတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေပြီး Trabzon သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကြယ်တာရာများမြင့်တက်လာသည့်ကြယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
WE SEMELA စီမံကိန်းကို CABLE အဖြစ်လေ့လိမ့်မယ်
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမြို့တော်ဝန်Zorluoğluက“ Uzungölနှင့်Sümelaဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးပါသောခရီးသွားလုပ်ငန်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ င်ရောက်လာသော guests ည့်သည်များအားပြlessနာများလျော့နည်းစွာဖြင့်ဤနေရာမှထွက်ခွာသွားရန်ခွင့်ပြုသည့်ကွင်းဆင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ နေရာနှစ်ခုစလုံးအတွက်ခရီးသွားဘတ်စ်ကားများကိုareaရိယာတစ်ခုတည်းတွင်ထားရန်၊ မက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်၏မော်တော်ယာဉ်များမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်ထိုတွင်ရှိပရမ်းပတာဖြစ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးလေးသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ထိုဒေသကိုပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေမည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာSümelaကိုကျွန်တော်တို့ကေဘယ်လ်ကားတွေလာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့စီမံကိန်းတင်ဒါမကြာမီလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်းနှင့်အတူထိုဒေသကိုအပျော်စီးလှေကားထစ်များနှင့်လမ်းလျှောက်သည့်လမ်းကြောင်းများနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဖြစ်ကျနော်တို့တူညီတဲ့ဒေသအတွက်ခေတ်မီကဖေးစားသောက်ဆိုင်အပေါ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကUzungöl၏အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများပြီးစီးခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်းကျင် ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်အတူကျောက်ခင်းလမ်း၊ လမ်းများ၊ စိမ်းလန်းသောlightingရိယာများ၊ အလင်းရောင်၊ ဒါကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ရမယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် ပတ်သက်. channel ကို flash ရှင်းပြချက်
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း Sumela ကျောင်းတိုက်ကေဘယ်လ်ကား
Sumela ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းသည်စင်ပေါ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ Manastar
Sumela ကျောင်းတိုက် Ropeway စီမံကိန်းဖြစ်သွားဘာလဲ?
Sumela ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် Uzungol Ropeway စီမံကိန်းခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းမတူကွဲပြားခြင်းထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
Sumela နှင့် ropeway စီမံကိန်း၏အဘယ်အရာကိုစင်မြင့်မှာUzungöl'de
Uzungöl'deနှင့်Sümela Ropeway စီမံကိန်းများအတွက်ဧရာမ 20 Million Dollar ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
RayHaber 13.02.2020 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ